Iinkampani ezili-10 ezilungileyo zokusebenzela eSpain | Ezezimali
USusana Maria Urbano Mateos | | Ngqesho, iinkampani
Sifuna ukubalasela, kwaye sifuna sebenza ngokusemgangathweni, Akukho mathandabuzo. Ayinamsebenzi ukuba sizinzulu-lwazi, abacebisi bezezimali, abaqeqeshi, abagcini zincwadi, abakhi bezitena okanye abakhi bezitshixo, sonke sihlala sifuna ukuphucula ulwazi lwethu, nokuba inkampani esiyisebenzelayo yeyona igqwesileyo, kuzo zonke iinkalo.
Iinkampani zikwanalo eli phupha: ukuba ngu yeyona nkampani ilungileyo yokusebenzela eSpain Sisiqinisekiso sokuba ezona zibalaseleyo ziya kuba phakathi kwabo, kwaye abantu, ngokucacileyo, bafuna ukuba yinxalenye yeyona nkampani ilungileyo bayisebenzeleyo eSpain okanye kwihlabathi liphela. Iinkampani ezili-10 ezilungileyo zokusebenzela eSpain, kodwa kuqala, sifuna ukuthetha ngothotho lweengongoma.
Ngaba ukhetha ezona nkampani zibalaseleyo ukuba usebenzele zona? Ngaphambi kokukwazisa kwezi nkampani, makhe sithethe kancinci malunga nala manqaku.
1 Ngaba zeziphi iinkampani eziphambili ezikhethwe ukuba zisebenze eSpain?
1.1 Ezi zizinto ezenza ukuba inkampani ibe nomtsalane kwimarike yomsebenzi:
2 Iinkampani ezili-10 ezilungileyo zokusebenzela eSpain
2.7 Iqela leMars
3 Ezona nkampani zibalaseleyo zokusebenzela umhlaba
3.1 Ezi ziinkampani ezilungileyo kwihlabathi ukusebenzela kuzo
Ngaba zeziphi iinkampani eziphambili ezikhethwe ukuba zisebenze eSpain?
Okokuqala, kulungile ukwazi izinto okanye izinto ezenza ukuba inkampani ibe nomtsalane ngakumbi kunenye kwintengiso yabasebenzi nakuwo onke amanqanaba e-NGOs kunye nemibutho eyahlukeneyo.
Ezi zizinto ezenza ukuba inkampani ibe nomtsalane kwimarike yomsebenzi:
Ukuthembeka kweenkokheli zayo
Ibhekisa kwisakhono sabalawuli beenkampani sokuba nobunkokeli kumbutho wonke. Ukuba iinkokeli ziyakwazi ukuhambisa iinjongo kunye nenkonzo yenkampani kubaqeshwa bayo, kodwa ngenkxaso, inkuthazo, kwaye kunjalo, ngokuziphatha okuhle.
Intlonipho yawo onke amalungu ombutho
Imibutho enabaphathi abanyanzelekileyo, engabandakanyi abanye abasebenzi kwaye isezikhundleni ezigqithileyo, ayiyilungelanga imeko yomsebenzi. Ibhekisa kwintlonipho yomsebenzi womntu ngamnye, nokuba sithini isikhundla sakhe, kunye nokuba ubabandakanya njani kwiinjongo zenkampani.
Ibhekisa ekulinganeni ngazo zonke iindlela, nokuba yeyokwabelana ngesondo, ubuzwe, inkolo kunye nemisebenzi, okanye ukukhetha ubuqu ngokwenyuselo labasebenzi, ilizwi ekuthathweni kwezigqibo kodwa nakwizohlwayo ezinokubakho.
Ikratshi lokuba lilungu lombutho
Sisiphumo senkcubeko elungileyo yombutho, kwaye kulula ukuyichaza: ikratshi lokusebenza kwinkampani okanye umbutho.
Ibhekisa kwindawo yokusebenza, umzekelo, ubuqabane, ukuhlala kakuhle phakathi kwamalungu ombutho, imeko yomsebenzi intle.
Ngoku ekubeni sisazi ukuba kutheni enye inkampani ingcono kunezinye (i) zokusebenzela, ngoku sinokwazi ezona nkampani zibalaseleyo zokusebenzela eSpain, ngaphandle kobungakanani bombutho okanye isebe lawo.
Yinkampani ezinikele kuyo i-biotechnology kunye namayeza, kwaye inabantu abamalunga nama-2000 kulo mbutho. Inobukho kumazwe angama-39 kwaye malunga neesahlulo ezili-10. Ukongeza kwimpumelelo yeshishini, iyinxalenye yolu luhlu kuba ayinakho kuphela ukutsala abantu ngokulungiselela okuhle, kodwa ikwakhuthaza uqeqesho oluqhubekayo lwabasebenzi bayo.
Kule nto sinokongeza ukuzibophelela kwayo kwezentlalo kwiziseko ezahlukeneyo ezilwa ucalucalulo lwabasebenzi nangayiphi na indlela, ukukhuthaza ukudityaniswa kwabaphambukeli kunye nabakhubazekileyo kwimarike yezabasebenzi.
U-Bain ngu Inkampani yeengcebiso yeqhinga eyenziwe ngabantu abayi-100. Isibheno sayo kukuba ngaphezulu kokutsala iingcali, bayazinikezela ekuqeqesheni abasebenzi babo, besenza amacebo abumba imisebenzi yabo yobungcali ngesandla. Batsala abantu abanamava abanzi, abaphumeleleyo kutshanje kwaye abenza iidigri zabo okanye isidanga sazo.
Ukongeza, banengqikelelo yobuchule obugqwesileyo, apha ekhaya nakwamanye amazwe.
ICigna ngu inkampani yeinshurensi yezempilo malunga nabasebenzi abayi-150 kwizikhundla zayo ezinobukho kumazwe angaphezu kwama-30 kunye nezigidi ezingama-70 zabathengi. Inkampani ibikhona eSpain ukusukela nge1954 kwaye, ngenxa yoku, sele benedumela elihle kwimarike yezabasebenzi eSpain.
Kutheni uCigna ekuluhlu? Kungenxa yokuba yinkampani ekukhuleni rhoqo kunye nokuthelekelela ngaphandle kokuphila kwayo ixesha elide kwimakethi yaseSpain kwaye ngenxa yokuba indawo yokusebenza ilungile.
IMundipharma yi inkampani yebhayoloji owazalelwa eSpain kuphela kwi2003, kodwa eyinxalenye yePurdue-Mundipharma-Napp enobukho kumazwe angama-40 kwihlabathi liphela kunye nabasebenzi abangama-6000 kwihlabathi liphela.
Ngo-2013 nango-2014 babizwa njengeyona nkampani ibalaseleyo yokusebenzela inqanaba labasebenzi abangama-50-100.
I-EMC yenye yeefayile ze- uninzi lweenkampani ezinobuchule ngokwetekhnoloji yolwazi ibhekisa, egxile ikakhulu kwikhompyuter kwilifu: ulawulo, ukugcinwa, ukuveliswa kunye nohlalutyo lolwazi kwilifu leenkampani zazo zonke iintlobo nobukhulu.
Inobukho kumazwe angama-86 kwaye inabantu abangama-70.000 kudidi lwayo. Ngaphakathi kwi-EMC abasebenzi bakho banokwakha ikhondo lomsebenzi wobungcali kunye nenkampani, besebenzisana bobabini kuphuhliso lwabo kwezemfundo nakwezobungcali.
Ukuba uyazi itekhnoloji kwaye uyazithanda izixhobo, uyazi ukuba ukuthetha ngeCisco kuthetha enye yeefayile ze- Ezona nkampani zinkulu kwaye zinobuchule kwihlabathi. ICisco yasekwa ngo-1984, kwaye bayenza, bayalungisa, bagcina kwaye baphuhlisa iimveliso ezinxulumene nonxibelelwano.
Nabani na onomsebenzi onxulumene nawo othungelwano Uya kuba nomdla ngakumbi kwaye ube nebhongo ngokusebenza eCisco. Singathetha ngayo yonke imigaqo-nkqubo yokugaya kunye nembuyekezo, kodwa ayilunganga xa sithetha ngenkampani enegama elifana nelikaCisco.
Sithetha ngeyona nkampani ilungileyo yokusebenzela u-2015 kwiinkampani ezinabasebenzi abangama-500-1000. IMars yinkampani evelisa ukutya kwaye fumenzi weemveliso ezinjengeM & Nks, Royal Canin, Whiskas, Frolic nezinye ezininzi. Bavelisa i-33 yezigidigidi zeedola kwintengiso ngonyaka kunye nabasebenzi abangama-72.000 kwihlabathi liphela.
E-Spain ubomi babo bufutshane, baneminyaka nje engaphezulu kwe-30 yokufika kwabo kwaye banabasebenzi abangama-870 kwilizwe liphela. Ichongwe njengeyona nkampani ibalaseleyo yokusebenzela u-2015.
Ngaba ukhona umntu ongayazi iMicrosoft? Sithetha ngenkampani ezisa ikhompyuter phantse kuwo onke amakhaya, kwaye ivelisa iibhiliyoni zeedola unyaka nonyaka. Phantse konke Iikhompyuter zakho zine-Microsoft Windows efakiweyo.
Enye yezona nkampani zibalaseleyo ukusebenzela, hayi eSpain kuphela, kodwa kwihlabathi, kuba ikhuthaza amakhondo obugcisa, ingqikelelo yomsebenzi omkhulu kwinkampani yobu bukhulu inkulu kakhulu, kwaye imeko yomsebenzi ayinakulinganiswa. Nabani na angathanda ukusebenza kwiMicrosoft, icacile kwaye ilula.
I-Adecco ngoyena mthengisi mkhulu we kubasebenzi hayi kuphela eSpain, kodwa kwihlabathi liphela. Inobukho kumazwe angama-60 anabasebenzi abangama-28.000 kwiiofisi ezingama-5.500 100.000 ezibonelela ngokuthumela, ukuqeqesha nokukhangela abasebenzi kwiinkampani ezingaphezu kwe-XNUMX.
Ihlala iyinxalenye yefayile ye- Uluhlu lweenkampani eziphambili onokusebenzela kuzo: Uqikelelo oluhle kunye nendawo yokusebenza ukuphuhlisa ikhondo lobungcali, ukongeza, abasebenzi bayazingca ngokunxiba ihempe yeAdecco, njengoko bencedisa iinkampani, kodwa nabantu befumana umsebenzi ongcono.
Sithetha ngenye yeenkampani ze i-inshurensi ekhokelayo kwihlabathi kunye neemveliso zemali, kunye nobukho kumazwe angama-40 anabasebenzi abangama-53.000. Vula ISpain isebenza phantsi kwegama le-ING ngqo.
I-ING ibonelela ngobunkokheli obungenakuphikiswa, bonwabele okona kulungileyo kwicandelo labo, ngomgaqo-nkqubo okhuthazayo kunye nowemivuzo, kunye nomsebenzi ogqwesileyo kunye noqikelelo lobungcali.
Ezona nkampani zibalaseleyo zokusebenzela umhlaba
Ndigqibile ukubukela iinkampani ezilungileyo zokusebenzela eSpain, kunokuba kuhle ukuba uthethe ngeyona nkampani ubusebenzela kuyo emhlabeni. Sele sithetha ngeenkampani ezinengeniso enkulu kunye nobungakanani, kude lee kwezi sizikhankanyileyo apha zinamakhulu ambalwa abasebenzi.
Ezi ziinkampani ezilungileyo kwihlabathi ukusebenzela kuzo
Google -eTekhnoloji yoLwazi
IZiko le-SAS-iTekhnoloji yoLwazi
I-WL Gore kunye ne-Associates-Iimveliso zeMpahla eyolukiweyo
INetApp - Unxibelelwano ngogcino lwedatha kunye noLawulo
I-BBVA-Iinkonzo zezezimali kunye neinshurensi
IMonsanto-Biotechnology kunye neAgrochemicals
American Express - Iinkonzo zezeMali
Izifundo zenziwa phantse kwiinkampani ezingama-60.000 kwaye zibandakanya uhlalutyo ngaphakathi nangaphandle kweenkampani, kuphando kunye nophando lwendlela abaphathwa ngayo abasebenzi ngaphakathi kwabo.
Kwiinkampani, ukuba yinxalenye yolu luhlu ayisiyiyo nje indawo yekratshi, kodwa ikwaqinisekisa ngokufumana abantu abazilungiselele ngakumbi, okwenza iziphumo zabo zibengcono kwaye zibengcono, kwaye kutheni kungenjalo, ikwayiqondo lentengiso yasimahla eliqinisa uphawu .
Ngokomzekelo, UGoogle akakhathali ngokutsala abasebenzi, Yonke imihla ufumana amakhulu amawaka ezicelo zemisebenzi, ikuvumela ukuba ugxile kwimizamo yakho yokuphuhlisa abasebenzi bakho kunokuba ubathathe.
Ngaphandle kwamathandabuzo, oku kunye nawo onke amanqanaba kufuneka kubonise iinkampani ukubaluleka kunye neenzuzo zokukhuthaza indawo efanelekileyo yokusebenza apho umqeshwa ngamnye oyenzayo exabisekileyo, ehlonitshwayo kwaye ekhuthazwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Iinkampani ezili-10 ezilungileyo zokusebenzela eSpain